Ihe Atụ Jizọs Mere Gbasara Oriri Agbamakwụkwọ (Matiu 22) | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
IHE ATỤ JIZỌS MERE GBASARA ORIRI AGBAMAKWỤKWỌ
Mgbe oge Jizọs ga-ejecha ozi ya ruwere, o mekwuru ihe atụ ndị ọzọ iji gbaa ndị odeakwụkwọ na ndị isi nchụàjà n’anwụ. N’ihi ya, ha chọrọ igbu ya. (Luk 20:19) Ma, Jizọs agbachabeghị ha n’anwụ. O mere ihe atụ ọzọ. Ọ sịrị:
“Alaeze eluigwe dị ka otu nwoke, bụ́ eze, nke meere nwa ya nwoke oriri alụmdi na nwunye. O wee zipụ ndị ohu ya ka ha gaa kpọọ ndị a kpọrọ òkù ịbịa oriri alụmdi na nwunye ahụ, ma ha ekweghị ịbịa.” (Matiu 22:2, 3) Ihe Jizọs ji malite ihe atụ a o mere bụ “Alaeze eluigwe.” N’ihi ya, “eze” ahụ o kwuru okwu ya enweghị onye ọzọ ọ ga-abụ ma ọ́ bụghị Jehova Chineke. Ònyekwanụ bụ nwa ya nwoke ahụ? Ole ndị bụ ndị a kpọrọ òkù ịbịa oriri alụmdi na nwunye ahụ? Azịza ha araghị ahụ́. Nwa eze ahụ bụ Ọkpara Jehova. Ọ bụkwa ya na-eme ihe atụ a. Ndị a kpọrọ òkù bụ ndị ga-eso Ọkpara Jehova chịa n’Alaeze eluigwe.
Ole ndị e bu ụzọ kpọọ òkù ahụ? Ọ dị mma, ole ndị Jizọs na ndịozi ya nọ na-ezi ozi ọma Alaeze Chineke? Ọ bụ ndị Juu. (Matiu 10:6, 7; 15:24) Ha kwetara ịna-edebe Iwu ha na Chineke ji gbaa ndụ n’afọ 1513 Tupu Oge Ndị Kraịst. Ha si otú ahụ bụrụ ndị mbụ nwere olileanya ịghọ “alaeze nke ndị nchụàjà.” (Ọpụpụ 19:5-8) Ma, olee mgbe a ga-akpọ ha ka ha bịa “oriri alụmdi na nwunye ahụ”? Ọ bụ n’afọ 29, bụ́ mgbe Jizọs malitere ikwusa ozi ọma Alaeze eluigwe.
Olee otú ọtụtụ ndị Izrel si zaa òkù ahụ a kpọrọ ha? Jizọs sịrị na ‘ha ekweghị abịa.’ Ọtụtụ n’ime ndị ndú okpukpe na ndị ọzọ ekwetaghị na ọ bụ ya bụ Mesaya ahụ, bụ́ onye Chineke họpụtara ka ọ bụrụ Eze.
Ma, Jizọs kwuru na ndị Juu ka nwere ohere ịbịa oriri ahụ. Ọ sịrị: “[Eze ahụ] zipụkwara ndị ohu ya ndị ọzọ, sị, ‘Gwanụ ndị ahụ a kpọrọ òkù, sị: “Lee! Akwadebewo m nri ehihie m, e gbuwo oké ehi na anụ m ndị mara abụba, a kwadebewokwa ihe niile. Bịanụ n’oriri alụmdi na nwunye a.”’ Ma ha ejighị ya kpọrọ ihe, ha wee gawa, otu onye n’ubi ya, onye ọzọ n’ahịa ya; ma ndị fọdụrụ jidere ndị ohu ya, mee ha ihe ihere ma gbuo ha.” (Matiu 22:4-6) Ihe a Jizọs kwuru dabara n’ihe ga-eme ozugbo a malitere inwe ọgbakọ Ndị Kraịst. N’oge ahụ, ndị Juu ka nwere ohere iketa Alaeze eluigwe, ma ọtụtụ n’ime ha ekweghị aza òkù ahụ a kpọrọ ha. Ha medịrị ụfọdụ n’ime ndị “eze” ahụ dunyere ka ha kpọọ ha òkù, ihe ihere.—Ọrụ Ndịozi 4:13-18; 7:54, 58.
Gịnị ga-eme ndị Juu ebe ọ bụ na ha azaghị òkù ahụ a kpọrọ ha? Jizọs kwuru, sị: “Eze ahụ were iwe wee ziga ụsụụ ndị agha ya ma bibie ndị ahụ na-egbu ọchụ, gbaakwa obodo ha ọkụ.” (Matiu 22:7) Ihe a Jizọs kwuru mezuru n’afọ 70, mgbe ndị Rom bibiri “obodo ha” bụ́ Jeruselem.
Ebe ha na-ekweghị aza òkù ahụ a kpọrọ ha, ọ̀ pụtara na enwezighị ndị ọzọ a ga-akpọ? Jizọs ekwughị otú ahụ. Kama, ọ sịrị: “[Eze ahụ] wee sị ndị ohu ya, ‘N’ezie, a kwadebewo oriri alụmdi na nwunye a, ma ndị a kpọrọ òkù erughị eru. Ya mere, gaanụ n’okporo ụzọ ndị e si apụ n’obodo, kpọọkwanụ onye ọ bụla unu hụrụ ka ọ bịa oriri alụmdi na nwunye a.’ Ya mere, ndị ohu ahụ gara n’okporo ụzọ wee kpọkọọ ndị niile ha hụrụ, ma ndị ọjọọ ma ndị ọma; ọnụ ụlọ e ji eme ememme agbamakwụkwọ ahụ wee jupụta ná ndị nọ na-eri ihe na tebụl.”—Matiu 22:8-10.
Anyị kwesịrị iburu n’obi na Pita onyeozi ga-emecha nyewere ndị Jentaịl aka ka ha bụrụ ezigbo Ndị Kraịst. Ndị Jentaịl bụ ndị na-abụghị ndị Juu ma ọ bụ ndị na-esoghị ndị Juu na-ekpe okpukpe ha. N’afọ 36, onyeisi ndị agha Rom aha ya bụ Kọnịliọs na ndị ezinụlọ ya natara mmụọ nsọ Chineke, si otú ahụ soro ná ndị ga-eketa Alaeze eluigwe Jizọs kwuru okwu ya.—Ọrụ Ndịozi 10:1, 34-48.
Jizọs kwuru na ọ bụghị mmadụ niile bịara oriri agbamakwụkwọ ahụ ga-adị “eze ahụ” mma. O kwuru, sị: “Mgbe eze ahụ batara inyocha ndị ọbịa ahụ, ọ hụrụ otu nwoke nke na-eyighị uwe alụmdi na nwunye. O wee sị ya, ‘Enyi, olee otú i si bata n’ebe a n’eyighị uwe alụmdi na nwunye?’ O nyeghị ya ọnụ okwu. Mgbe ahụ, eze ahụ gwara ndị na-ejere ya ozi, sị, ‘Keenụ ya agbụ ụkwụ na aka ma tụpụ ya n’ọchịchịrị dị n’èzí. N’ebe ahụ ka ọ ga-akwa ákwá ma taa ikikere ezé.’ N’ihi na ndị a kpọrọ òkù dị ọtụtụ, ma ole na ole ka a họọrọ.”—Matiu 22:11-14.
O nwere ike ndị ndú okpukpe ahụ aghọtaghị ihe ihe niile Jizọs kwuru pụtara ma ọ bụkwanụ otú o si gbasa ha. Ma, obi adịghị ha mma. Ha kpebisikwuru ike na ha ga-egbufu onye a na-emechu ha ihu.
N’ihe atụ Jizọs mere, ònye bụ “eze ahụ”? Ònye bụ “nwa ya nwoke”? Ole ndị e bu ụzọ kpọọ ka ha bịa oriri agbamakwụkwọ ahụ?
Olee mgbe e bidoro ịkpọ ndị Juu, oleekwa ndị e mechara kpọwa?
Jizọs kwuru na ndị a kpọrọ òkù dị ọtụtụ, ma ole na ole ka a họọrọ. Gịnị ka ihe a o kwuru pụtara?
Jehova “Adịghị Ele Mmadụ Anya n’Ihu”
Chineke na-anụ ekpere nke ndị niile na-efe ya na-ekpegara ya n’agbanyeghị agbụrụ ma ọ bụ mba ha si, ma hà nwere ego ma ọ bụ na ha enweghị. Olee otú anyị si mara?